‘रामकहानी’ प्रचारमा अपनाइयो यस्तो शैली ! « Ramailo छ
‘रामकहानी’ प्रचारमा अपनाइयो यस्तो शैली !
निर्देशक सुदर्शन थापाले भदौ २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘रामकहानी’ प्रचारको नयाँ फर्मुला अपनाएका छन् । निर्माता समेत रहेका थापाले सुन्दा सामान्य तर रमाइलो प्रचारको फर्मुला अपनाएका हुन् ।
राजधानीका केही रेष्टुरेन्ट र होटलमा प्रयोग हुने वाइफाइको युजर नेम र पासवर्ड नै थापाले ‘रामकहानी’ राख्न लगाएका छन् । काठमाण्डूका एक दर्जन बढी रेष्टुरेन्ट, होटल तथा क्याफेका वाइफाइमा रामकहानी नामका युजर नेम र पासवर्ड रहेको निर्देशक तथा निर्माता थापाको भनाई छ । हरेक समय इन्टरटेनमा समय बिताउने दर्शकका लागि यो अभियान प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ । उसो त पछिल्लो समय फिल्म प्रचारमा विभिन्न शैली अपनाउन थालिएको छ । यही शैलीहरु मध्ये ‘रामकहानी’ टिमले नयाँ शैली अपनाएको हो ।
भदौ २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘रामकहानी’ मा पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारको अभिनय छ । एउटा गीत सार्वजनिक गरिएको फिल्मको यही महिना प्रोमो सार्वजनिक हुनेछ । पूजा र आकाशसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :